OoVimba bokuPhatha iMarike-Funda ukuRhweba
tag: Ulindelo lweNtengiso
I-USDCHF iqhubela phambili kwiKhosi yayo ephezulu
Ukuhlaziywa: 25 January 2022
Uhlalutyo lwamaxabiso e-USDCHF-nge-25 kaJanuwari
I-USDCHF ikhukuliseka kwikhosi yayo ephezulu njengoko isilela ukugcina ukuvutha okuye kwayigcina ihambela phezulu. Iimpawu ezibonisa ukuba isibini semali sasilahlekile safika ekupheleni kukaDisemba 2021 njengoko ixabiso lizinyanzele ngaphaya kwendawo yokudibanisa phakathi komgca we-uptrend kunye ne-0.91570 yenkxaso yezinga. Imarike yakwazi ukubuyisela kumgca wenkxaso olandelayo nguNyaka omtsha, usebenzisa i-candlestick engulfment pattern yayo yokutyikitya.
USDCHF Amanqanaba aBalulekileyo
Amanqanaba okumelana: 0.93770, 0.93350, 0.92740
Amanqanaba enkxaso: 0.90360, 0.91070, 0.91570
USDCHF Ixesha elide Trend: Range
Intshukumo yentengiso yentengiso kudala isiza ukusukela phakathi ku-2021. Ixabiso linokubonwa lisenza iibounce zasendle kumgca we-uptrend. Nangona kunjalo, intshukumo yokwenyuka kwamaxabiso yayisenza ukwehla okuphezulu kodwa kukwinqanaba eliphezulu. Oku kubangelwa kwinqanaba lokumelana neveki kwi-0.93770, ebeke umda kwiimarike ukusuka phezulu, ngaloo ndlela upheka uxinzelelo phakathi komgca we-uptrend kunye nawo ngokwawo.
Oku kukhokelele ekunyukeni koxinzelelo kumgca wokuthambekela. Iimpawu zokuqala zobuthathaka kwicala labathengi zafika ekupheleni kuka-2021 xa ixabiso liqhubela phambili kwindawo yokudibanisa. NgoNyaka oMtsha, ixabiso libuyiselwe, kuphela ukuba libe lifutshane kwi-0.92740 kwaye emva koko likhukulise kwikhosi yalo ephezulu. Ngaphandle kwamandla ahlaziyiweyo ngoku abathengi, i-Parabolic SAR (Yeka kunye nokuguqula) isabonisa ukuhla kwimarike kunye namachaphaza ayo ngaphezu kwamakhandlela emihla ngemihla.
USDCHF Ixesha elifutshane Trend: Uptrend
Itshathi yeeyure ze-4 ibonisa ukuba imarike yenza i-push eqinile ukuya phezulu, iphule inqanaba lexabiso le-0.91570, kwaye ngoku ixoxisana nomgca we-uptrend. Abathengi bafuna ukubuyisela indawo yabo kumgca we-uptrend. I-EFI (i-Elder Force Index), ebisoloko ijikeleza kwinqanaba elingu-zero, ngoku ikhukuliseka ibheka phezulu njengomboniso wamandla wabathengi. Sinokulindela ukuba imarike iphakame kwi-0.92190 kwaye nangaphezulu, kodwa ngokuthengisa uxinzelelo oluqhubekayo, ixabiso lingawela kwakhona ngaphantsi kwe-trendline.
tags Itshathi yemihla ngemihla, Forex Analysis Technical, Ulindelo lweNtengiso, Price Action, USDCHF
Ixabiso le-NZDUSD lifuna ukuHlanganisa ngakumbi njengoko iinkunzi zeBulls ziCwangcisa ukuTyala
Uhlalutyo lwe-NZDUSD-Ixabiso lifuna ukuManyaniswa ngakumbi malunga ne-0.66970 njengoko abathengi baCwangcisa ukuTyala.
Ixabiso le-NZDUSD lifuna ukudibanisa ngakumbi malunga ne-0.66970 inqanaba elibalulekileyo njengoko abathengi baceba ukuhlawula inqanaba lexabiso kwi-0.68790 amanqanaba abalulekileyo. Ixabiso lokuthambekela kwendalo ye-NZDUSD kukuqhubeka kwisigaba sayo sokuqokelela phakathi kwamanqanaba e-0.68790 kunye ne-0.66970 njengoko iinkunzi zeenkomo zilungiselela ukuncedisa ukuthambekela kwexabiso nangona zidibanisa.
NZDUSD Amanqanaba aBalulekileyo:
Amanqanaba okumelana: 0.72080, 0.70890
Amanqanaba enkxaso: 0.6879, 0.69770
I-NZDUSD yexesha elide iTrend: Bullish
Ukususela phakathi ku-Agasti, imarike ithathwa njengobungqina besigaba sokudibanisa ngokukhawuleza phakathi kwamanqanaba e-0.70890 kunye ne-0.68790. Nangona kunjalo, izenzo ezibangelwa iinkunzi zeenkomo kunye neebhere ekugqibeleni zavumela umsebenzi wexabiso ukuba uphule kwinqanaba elibalulekileyo le-0.70890. Eli nqanaba libe lelona likhulu.
Ukusuka kwindawo yexabiso le-0.70280, ukuqhuba kwebhere kwafika kunye nokutsalwa kwemarike njengoko abathengisi babandakanyeka kwixabiso lentengo. Ixabiso liyahla ngokweendawo ezininzi de iibhere zihluthe. Imakethi ngoku ikwinqanaba lokuqokelela ngenxa yexabiso lokuqala lokuhanjiswa kwe-bearish ngaphambi kokuqhekeza nge-0.70280. Kummandla wokuqokelela, abathengi baceba ukufikelela kumda wenkunzi yenkomo ekudityanisweni njengoko ingeniso kuluhlu luqhubeka.
I-NZDUSD yeXesha elifutshane eliQhelekileyo: UkuHamba
Ukunyuka kunye nokuhla kweemarike kubanjwe ngokucacileyo kwiimarike ezihlukeneyo. Abathengisi badlala i-downplay, ngelixa inkunzi yenkomo ikwakhaba ubutyebi bexabiso kwi-NZDUZD. Abathengi baceba ukuvavanya ukuhamba kwexabiso ukusuka kwinqanaba lexabiso le-0.67790 njengoko umzuzu kwisenzo sexabiso uhlala. Njengoko imarike ilungiselela ukuphakama ngaphezu kwebhere, abathengisi baya kukhangela izikhundla zokubamba kwimarike.
tags Itshathi yemihla ngemihla, Forex Analysis Technical, Ulindelo lweNtengiso, NZDUSD, Price Action
Ulandelelwano lweMarike ye-AUDJPY ilandela iXesha leBearish
Uhlalutyo lwe-AUDJPY-Ulandelelwano lweMarike lulandela iXesha leBearish ngaphantsi kwe81.920
Ulandelelwano lweemarike ze-AUDJPY lulandela ixesha le-bearish njengoko ixabiso liqhubeka lihla ngaphantsi kwexabiso lexabiso le-81.920. Indawo yentengiso okwangoku ikwixesha le-bearish, ngoko ke amaxabiso amaninzi kulindeleke ukuba athengiswe ngokufutshane. Abathengi abathenga izikhundla ezide ekugqibeleni babambe uxinzelelo kwimarike njengoko kusenzeka amaxabiso amaninzi. Imakethi ke ngoko ihlalutyelwe ukuqhubeka nenqanaba lemfuno ye-bearish.
AUDJPY Amanqanaba aPhambili:
Amanqanaba okumelana: 86.060, 84.160
Amanqanaba enkxaso: 81.920, 78.750
Ubunzima beemarike kwiimfuno zexabiso zaqala ukuvavanywa ukuba zifakwe phakathi kwezinto ezimbini ezilindelekileyo kwintshukumo. Omabini amathemba aye akhethwa kuluhlu ngaphambi kokuba iinkunzi zenkomo zingene kunye nefuthe lenyathelo lokuqala lamaxabiso. Inqanaba lexabiso, ngakolunye uhlangothi, likhuphukele kwindawo entsha ebalulekileyo ye-86.060 njengoko i-bull trend ifumana amandla. Abathengisi bakwafihla izenzo zabo ngokukhokelela ixabiso kwimpembelelo yabo. Bebodwa behlise intshukumo yexabiso ukuya kwinqanaba elibalulekileyo le-78.750.
Ngaphezu koko, iinkunzi zenkomo zaphinda zakhohlisa inqanaba lexabiso ukusuka kwinqanaba eliphambili le-78.750 ngokuchaza iibhere ngokubunjwa okuqinileyo kwamakhandlela. I-rally yamva nje yentengiso inyukele kwinqanaba elibalulekileyo le-84.160, kwaye abathengisi bathatha indawo emva kovavanyo kwakhona kweli nqanaba. Abathengisi, bephule i-81.920, ngoku bafuna ukuya ngaphantsi njengoko isalathisi se-RSI (i-Relative Strength Index) sibonisa umboniso wamandla wabathengisi kwitshathi yosuku lwe-1.
I-AUDJPY yeXesha eliFutshane leTrend: Bearish
Kwitshathi yeyure ye-4 yomboniso weemarike, umgangatho wemarike ubonisa utshintsho kwindlela yokuthenga abathengi ukuya kubathengisi. Iibhere ngoku zifakwe kwixabiso kwaye zilungele ukuhla. I-Parabolic SAR (Stop and Reversal) igcina ibonisa i-downtrend market display njengoko ulandelelwano lwayo luqhubeka luhamba ngokukhawuleza. Abathengisi, nangona kunjalo, balungele ukutyhala ulandelelwano lwe-bearish ezantsi ngaphaya kwenqanaba lexabiso le-81.920.
tags AUDJPY, Itshathi yemihla ngemihla, Forex Analysis Technical, Ulindelo lweNtengiso, Price Action
I-GBPJPY Iqhekeka ngokuthe chu emva koGuquko kwiNdawo yokuThengisa
Uhlalutyo lwamaxabiso e-GBPJPY-nge-21 kaJanuwari
I-GBPJPY iyantlitheka ngokuthe chu emva kokubuyisela umva kwindawo yonikezelo. Imarike iye yatshintsha ngokuqhubekayo amandla phakathi kweenkunzi zenkomo kunye neebhere. Kukho ukuhlanganiswa okuncinci kakhulu ukususela ngo-Oktobha 2021. Iinkunzi zeenkomo zahamba ixesha elide ukusuka kwindawo yokufuna kwi-148.970. Babephethe kakhulu emarikeni. Kwakukho iintsuku ezininzi ezilandelelanayo zokuqhutywa kwe-bullish engenakunqandwa ukusuka ngo-Oktobha kwi-148.970 ukuya kwi-Supply Zone kwi-157.730.
IiNdawo ezinkulu ze-GBPJPY
Iindawo zokubonelela: 157.730, 154.400
IiNdawo zeMbanga: 148.970 152.440
Emva kokuguqulwa kwendawo yokubonelela, imarike iphinde yahla yaya kwi-148.970. Inyanga kaNovemba yayikhathazwa kukudityaniswa. Ummandla wemfuno kwi-152.440 wanikezela kwiibhere njengoko inyanga iphelile. Ixabiso liphinde lafakwa kwindawo yemfuno eyi-148.970. Kwakukho ukuhlanganiswa okuncinci ngaphambi kokuba ixabiso linyukele kwi-157.730. Ipateni yokubuyisela umva kabini ephezulu yenziwe kwindawo yonikezelo. Uluhlu lweWilliams Present lubonise ukuba imarike ithengwe kakhulu. I-Parabolic SAR (Stop and Reversal) ekugqibeleni inike isiqinisekiso sokugqibela se-bearish run.
I-bearish trend steady iyabonakala kwitshathi yeeyure ezine. Amanqanaba asezantsi asezantsi kunye asezantsi akhokelela kwimarike kwindawo ye-154.400. I-Williams Percent Range okwangoku ithengiswe kakhulu kwixesha lemihla ngemihla kunye nexesha leeyure ezine. Indawo yonikezelo yangaphambili ingasetyenziswa ziinkunzi zenkomo ukuxhasa isenzo sokushishina.
Nangona kunjalo, iibhere zibonakala zinzima kakhulu njengoko ziqhubeka zenza iintshukumo ezingxamisekileyo emva kokuguqulwa kwendawo yokubonelela. Iibhere zinokuthi zityhale kwindawo ye-154.400 ukuya kwindawo elandelayo yemfuno kwi-152.440. Ukuqhawuka kunye nokuhlolwa kwakhona kulindeleke ngaphantsi kwendawo ye-154.400. Imakethi isaphazamiseka ngokukhawuleza emva kokuguqulwa kwendawo yokubonelela nge-157.730.
I-USDJPY Bulls 'Ukuqhekeka kunye nokuHlola kwakhona emva koKwandiswa
Uhlalutyo lwe-USDJPY: Ukwandiswa kukhokelela kwi-Bulls 'break Out kunye nokuvavanya kwakhona
Ukuqhambuka kwenkunzi ye-USDJPY kunye nokuvavanya kwakhona emva kokwandiswa kwakhokelela ekuqhutyweni kwe-bullish ngoSeptemba. Imarike yabanjwa ngokudityaniswa okuthathe iinyanga ezininzi. Inyanga kaSeptemba yaphela ngentshukumo engxamisekileyo. Kubekho ukwanda ngesiquphe ukusuka kwindawo yemfuno ye-109.019. Ukwandiswa kwakhokelela ekuqhamukeni kunye nokuphinda kuhlolwe ukuhlanganiswa kwexesha elide. Inqanaba elibalulekileyo kwi-109.010 liphinde lavavanywa kwakhona. I-Avareji ehambayo idale ithambeka elikhokelela kwimarike ngaphandle koluhlu.
USDJPY amanqanaba abalulekileyo:
Amanqanaba okumelana: 115.410, 110.810
Amanqanaba enkxaso: 112.710, 109.010
USDJPY intsingiselo yexesha elide: Ukutshintsha
Amanqanaba amatsha okuchasa kunye nenkxaso aye asekwa ngokudityaniswa okutsha. Indawo entsha yemfuno yenziwe kwi-112.710. Ummandla wemfuno uvavanywe kabini. Ummandla wokuchasa wadalwa ngomhla we-25 kaNovemba kunyaka ophelileyo. Ixabiso lizalise indawo ngaphakathi kweebhendi zeBollinger kwaze kwaba yilapho kubethelwa amaqela aphezulu. Oku kubangele ukuthengiswa okukhulu ngosuku olunye. Uqhambuko lobuxoki lwabonwa lusenzeka emva koko. Imarike yonke yenze unxantathu onyukayo ukusuka ekuphumeni ngoSeptemba kunyaka odlulileyo. Ukuqhawuka kunye nokuphinda kuhlolwe kwitshathi yemihla ngemihla ngaphandle konxantathu onyukayo. Iikhandlela ezintathu zemihla ngemihla zenziwe emva kokuvavanya kwakhona.
I-USDJPY yeXesha elifutshane eliQhelekileyo: Qalisa
I-Stochastic ibonise ukuba imarike yayithengiswe kakhulu kwixesha leeyure ezine. Ukuqhawuka kunye nokuvavanya kwakhona kwalandelwa ukugatywa okubukhali. Oku kucacile ngeentambo ezigqobhoze kancinci kwinqanaba eliphezulu leBollinger. I-Average ye-Average ye-Bollinger Band iye yatshintsha amacala ukuze ixhonywe ngaphezu kwamakhandlela. Iibhere ngoku ziqhuba imarike phantsi.
Imakethi okwangoku ithengiswa ngaphezulu kweyure ezine Stochastic. Oku kuhambelana neebhendi zeBollinger. Amakhandlela aphumle kwiibhendi ezisezantsi, ezinokuthi zisebenze njengenkxaso. Oku kunokwenzeka ukuba kubangele ukubuyisela kwi-115.410. Iibhere okwangoku zijolise kwindawo ye-112.720. Ke ngoko, ukuphinda kulandelelwe okulindelweyo kunokwenzeka ukuba kusetyenziswe ukuqokelela amandla ngakumbi kwintshukumo ye-bearish.
tags Itshathi yemihla ngemihla, Forex Analysis Technical, Ulindelo lweNtengiso, Price Action, USDJPY
I-AUDUSD Ifuna Ukuqhawula i-0.73150 Umqobo Ukulandela i-Setback yakamuva
Uhlalutyo lwamaxabiso e-AUDUSD-nge-20 kaJanuwari
I-AUDUSD ifuna ukugqithisa i-0.73150 njengoko iphinda ibuyisela umva wayo wamva nje. Imakethi inokubonwa njengento egoso-goso ngokusebenzisa umjelo onyukayo, usenza amaqondo aphakamileyo kunye namazantsi aphezulu. Ixabiso lenze unxibelelwano lokuqala kunye nenqanaba lokuchasana kwaye liye lehla kumda ophantsi wetshaneli. Ukunyuka kwangoku ukusuka kumda ophantsi wesiteshi kulindeleke ukuba kuphule inqanaba le-0.73150.
I-AUDUSD Amanqanaba abalulekileyo
Amanqanaba okumelana: 0.73150, 0.74470, 0.75590
Amanqanaba enkxaso: 0.72370, 0.71050, 0.69960
I-AUDUSD Ixesha elide iTrendi: Bullish
Ukudityaniswa okude kwathatha ixesha elide ukusuka ekuqaleni kuka-2021 ukuya phakathi ku-2021 kuphele kwixabiso le-7%. Ngokukhawuleza ukuba ixabiso lithintele kwi-0.71050, imarike ifuna ukubuyisela kwaye iqhube phezulu ngetshaneli. Nangona kunjalo, ngexesha lesithathu lokuhla kumda ophantsi weshaneli, ixabiso elingalindelekanga lidlula kulo kwaye lehla ngakumbi kwinkxaso ephantsi kwi-0.69960.
Abathengi beemarike, nangona kunjalo, abanikezeli kuxinzelelo njengoko befuna ukuchacha kwangoko. Iphethini yekhandlela "emhlophe-amajoni amathathu" yayisetyenziselwa ukunyuka kumgca wexabiso elilandelayo. Imarike ikhula ngakumbi isebenzisa elinye ijelo. Ngoku, ixabiso lifuna ukuphula umqobo we-0.73150. I-Average Average ixesha le-50 liye lehla ngaphantsi kwamakhandlela emihla ngemihla ukubonelela ngenkxaso kwimarike. I-Relative Strength Index ngoku inencam yayo engaphezulu kwe-50 mark.
I-AUDUSD Ixesha elifutshane iTrendi: Bullish
Ngexesha elifutshane, ixabiso liye laphuma kumda ophantsi wesiteshi esinyukayo kwaye ngoku uzama ukuxoxisana nomqobo wokuqala ohamba phambili, ofumaneka kwi-0.72370. Izinto ezingathandekiyo zixhasa iinkunzi zeenkomo ezigqithise uxhathiso olukhulu kwi-0.73150. Kwakhona, ixesha le-MA le-50 lisebenza njengenkxaso kwimarike njengoko isalathisi se-RSI ngoku sikwisiqingatha se-bullish yetshathi.
tags AUDUSD, Itshathi yemihla ngemihla, Forex Analysis Technical, Ulindelo lweNtengiso, Price Action
I-S&P 500 Falls Short kwi-4810.0 Resistance Zone
Uhlalutyo lwexabiso le-S & P 500-Januwari 19
I-S&P 500 iwela mfutshane kwindawo ye-4810.0 yokumelana. Ixabiso liye lanyuka kwitshaneli ehambelanayo enyukayo. Iinkunzi zibonisa ubuchule bazo ngokutyhalela imarike kwisiqingatha esiphezulu setshaneli. Nangona kunjalo, ngasekupheleni kukaNovemba ka-2021, i-S&P 500 yaqala ukubonisa ubuthathaka obubonakalayo njengoko ixabiso lihlala lihla kwaye linyuka ngaphezulu komgca ophakathi wetshaneli. Ekuqaleni kuka-2022, imarike iyancipha kwi-4810.0.
S&P 500 Amanqanaba aBalulekileyo
Iindawo zokuchasana: 5000.0, 4810.0
Iindawo zokuxhasa: 4581.0, 4467.0
S&P 500 Ixesha elide Trend: Bullish
I-marketment ye-uptrend movement ibe yinto yexesha elide ye-S & P 500. Oku kubonisa inqaba yeenkunzi zenkomo kwimarike. Nangona kunjalo, kukho amanqaku obuthathaka apha naphaya njengoko ixabiso liqhubela phezulu. Okuphawuleka kakhulu kukudipha kwemarike okwenzeka ngoSeptemba ka-2021, okukhokelele ekwehleni kwesiqingatha esisezantsi setshaneli kumgca wenkxaso we-4305.0. Nangona kunjalo, iinkunzi zenkomo zabuyela kwangethuba ukuze ziphinde zilawule kunye nexabiso kunye namakhandlela e-bullish alandelelanayo ukuya kwisiqingatha esiphezulu.
Obunye ubuthathaka beemarike buhlasele imarike ukususela ekupheleni kukaDisemba 2021 ukuya ekuqaleni konyaka ka-2022. Ngoko ke, ixabiso liwela kumgca ophakathi wesiteshi, odibanisa ne-4581.0. Kwakukho ukwehla okufutshane ngaphantsi kweli nqanaba ngaphambi kokuba imarike ibuyele. Kwabakho isiganeko esifanayo kungekudala emva koko. Ngomnyaka omtsha, ixabiso liye lahla phantsi kwinqanaba le-4305.0, ngoku lisondele kumda ophantsi wesiteshi. Iinkunzi zona zilindeleke ukuba zibuye kolu didi ekuhambeni kwexesha.
S&P 500 Ixesha elifutshane iTrendi: Bullish
Kwitshathi yeeyure ze-4, ixabiso liqalise ukuguqulwa ukusuka kumda ophantsi wesiteshi esifanayo. Isalathisi se-RSI (i-Relative Strength Index) inomgca wayo wesignali uqhubela phezulu ukusuka kwisimo esigqithisiweyo. Okufanayo kunokuthiwa nge-Stochastic Oscillator, ebuye yawela phezulu ukusuka kummandla ogqithisiweyo. Imarike kulindeleke ukuba iphakame kwakhona ukuze iphule i-4810.0.
tags Itshathi yemihla ngemihla, Forex Analysis Technical, Ulindelo lweNtengiso, Price Action, I-S & P 500
UCwangciso lweMarike ye-USDCAD yokutshintsha ukuTyeleka kwayo kwiSigaba seBullish.
Uhlalutyo lwexabiso le-USDCAD - ngoJanuwari 19
I-USDCAD yemakethe iceba ukutshintsha ukuthambekela kwayo kwinqanaba le-bullish kwinqanaba lexabiso le-1.24800. Umgangatho wentengiso yendalo yonke yenyathelo lexabiso ukusukela ekuqaleni kukaJuni uye wanda. Kwakhona sinokubona ukubonakaliswa kweebhere kwiimarike njengoko zivumela amaxabiso ukuba awele ukusuka kubude obuthile ukuya kumanqanaba abalulekileyo.
Imimandla yeXabiso ye-USDCAD:
Iindawo zokuchasana: 1.29190, 1.24800
Iindawo zokuxhasa: 122700, 1.19990
Ukuvela kwesigaba somthengi kubangelwa ukukwazi kwexabiso ukunyuka kwinqanaba elibalulekileyo le-1.9990 kwaye liqhubeke kwifomathi ye-bullish. Ixabiso lexabiso, nangona kunjalo, liqhubekile lihamba ngokuqhubekayo kwi-swing ephezulu kwi-bullish tendency de ekugqibeleni ifike kwinqanaba lexabiso elibalulekileyo le-1.29190.
Nangona kunjalo, ukusuka kule angle, kubonakala kukho umboniso wabathengisi njengoko bephumelele ekutshintsheni ukuqhelaniswa kwexabiso kwisigaba esifutshane se-bearish. Kodwa ke, batyhala ukuthambekela kwexabiso ukusuka kwi-1.29190 ukuya kwinqanaba le-1.22700 lokubaluleka. Esi sicwangciso sinye sesakhiwo sempembelelo yexabiso saqhubeka njengoko sabona iibhere zibandakanya inqanaba lexabiso le-1.24800. Abathengi sele bekulungele ukutshintsha ikhosi yexabiso ukusuka kweli nqanaba njengoko isalathisi sokunyuka sibonisa ukuhla kwexabiso kwi-bearish tendency.
Kwixesha leeyure ze-4, umboniso wexabiso ubonisa ukuqhelaniswa nemarike yangoku kunye nokuba yintoni emele yenzeke ngokulandelayo. Iibhere ziye zazisa ngempumelelo imarike yexabiso ukuya kwindawo yexabiso le-1.24800, kwaye abathengi ngoku babekulungele ukutshintsha ukuthambekela kweemarike njengoko i-Stochastic Oscillator ibonisa ixabiso kwingingqi ethengiswayo. Amaxabiso ke acwangciselwe ukuba anyuke abuyele kwi-1.29190 njengoko isigaba se-bullish singena.
tags Itshathi yemihla ngemihla, Forex Analysis Technical, Ulindelo lweNtengiso, Price Action, USDCAD
Uqikelelo loNyaka lweUSDCHF (2022)
Ukuhlaziywa: 18 January 2022
I-USDCHF Yonyaka ye-Forecast-Ixabiso limiselwe uQhubeko lweBullish
Uqikelelo lonyaka lwe-USDCHF kukuqhambuka kwe-bullish yokwakheka kukanxantathu. Ukusukela oko intengiso yehla ukusuka ngoJuni ukuya kuDisemba ka-2020, abathengi bebenobunjineli bentengiso ukuya phezulu, nkqu ngokuchasene nemikhosi ye-bearish. Oku kubona ixabiso lithatha ukunyuka kancinci kancinci, libe namazantsi aphezulu angaguqukiyo. Kodwa kwangaxeshanye, ukuphakama okuphantsi kunokubonwa kwixesha lenyanga, okukhokelela ekubunjweni kwe-tapering.
Amanqanaba okumelana: 1.02000, 0.96760, 0.94640
Amanqanaba enkxaso: 0.87640, 0.89960, 0.91870
I-USDCHF yeSicwangciso seXesha elide: I-Bullish
Ukuhamba kweemarike phambi kokuwa kwe-2020 akuzange kube yinto emfutshane kwipateni yonyaka ehleliweyo. Ixabiso linokubonwa ngokuhambisa ngokubanzi kwinqanaba le-1.02000 njengokumelana kunye nenqanaba le-0.96760 njengenkxaso. Amandla aphambili apha yi-bearish, ngamanye amaxesha ehla ngaphantsi kwenkxaso ngaphambi kokuba abuyele kwakhona. Ekugqibeleni, oku kukhokelela ekwehleni kwexabiso lika-2020 ukuya kwi-0.87640.
Ukusukela ekuweleni kwinqanaba lenkxaso ye-0.87640, abathengi bemakethi babambe imakethi kwaye bazabalaza ngokuchasene nemikhosi ye-bearish ukubangela ukuguqulwa kwemarike. Oku kubangele intshukumo ye-tapering kwipateni engunxantathu. I-Stochastic Oscillator icebisa ukuba ixabiso liya kuqhubeka linyuka kwaye ekugqibeleni liqhubele kwingingqi ethengiswa kakhulu. I-Parabolic SAR (Stop and Reverse) iphinda inike i-bias efanayo ngokulungelelanisa amachaphaza ayo ngaphantsi kwamakhandlela enyanga.
I-USDCHF yeSicwangciso seXesha eliPhakathi: Bullish
Kwitshathi yeveki, ixabiso liye lahla kumda ongaphantsi wepatheni yenxantathu, ebonisa ukuba ilungele ukuqalisa olunye uhlaselo kumda ophezulu ukuze uphumelele. I-Stochastic Oscillator ibekwe kakuhle emva kokutsiba kumda wommandla ogqithisiweyo ukuze inyukele phezulu. Uqikelelo lwe-USDCHF kwi-2022 luza kuphuma kwaye luhambe luye kwi-0.96760.
Uqikelelo loNyaka lwe-EURUSD (2022)
Uqikelelo loNyaka lwe-EURUSD-IMarike ilindeleke ukuba ibuyele kwi-1.1650
Uqikelelo lonyaka lwe-EURUSD lubhekiselele kwindawo yokumelana ne-1.1650. Unyaka wama-2020 wawukwimarike ye-EURUSD. Imali ye-euro ifumene amandla xa ithelekiswa nedola. Ngokuchasene noko kwakunjalo ngonyaka we-2021. Unyaka odlulileyo wawuyi-bearish ye-EURUSD. Idola yaphinda yafumana amandla njengoko i-euro yehla ngexabiso xa ithelekiswa nedola. Ngo-2020, unyaka waqala ngokudityaniswa kweenyanga ezintathu ubudala. Inyanga kaMatshi yabonwa ukudala ukuqhambuka kobuxoki kwindawo. Kwakukho uqhambuko lobuxoki ngaphezulu kwaye kwakhona ngaphantsi kwendawo. Emva koko, umthamo omkhulu wamakhandlela enyanga wawela phakathi koluhlu njengoko ii-wicks zabo zihamba ngaphantsi.
I-EURUSD imimandla emikhulu
Indawo yokuchasa: 1.2250, 1.1200
Indawo yenkxaso: 1.1650, 1.0900
Isicwangciso sexesha elide le-EURUSD: Bullish
Eyokuqala kaMeyi iqalise intshukumo ethe yaphuma ngempumelelo kulo mmandla ngoJuni. Ukuhamba kwe-bullish akuzange kuxhathise kwiinyanga ezine ezilandelelanayo kwi-2020. Imarike ibuyele kwindawo yemfuno ye-1.1650. I-bullish trend igcinwe njengoko ixabiso libhobhoze malunga nenqanaba le-1.1650. Intshukumo ye-bullish ekugqibeleni yadinwa ekufikeni kwindawo ye-1.2250.
Uphawu lokubuyisela umva olwenziwe ngaphantsi kwendawo ye-1.2250. I-Average Moving yawela kwicala eliphezulu lamakhandlela enyanga. I-double top ikhokelela kwi-bearish move. Umqala wophuka ngoSeptemba. Ixabiso lehle ngokukhawuleza. Indawo yokuchasana yangaphambili kwi-1.1200 yavavanywa. Amakhandlela amabini e-bullish akhiwe emva kokuqhuma kwi-1.1200. I-Stochastic ibonisa imarike ethengiswa kakhulu. Imarike kulindeleke ukuba ibuyele kwi-1.1650 kwitshathi yenyanga.
Isicwangciso seXesha eliPhakathi se-EURUSD: Bullish
I-Stochastic yathengiswa ngokugqithiseleyo ngoNovemba xa ikhandlela le-bullish livavanya indawo yangaphambili yokuxhathisa kwi-1.1200. Indawo yangaphambili yokuchasa ngoku isebenza njengendawo yenkxaso.
Umyinge ohambahambayo uye watshintsha izikhundla zokuxhasa amakhandlela kwixesha leveki. Ukuhamba kwe-bullish ukusuka kwindawo ye-1.1200 kulindeleke ukuba kuqhubeke kwindawo yokumelana ne-1.1650.
tags Itshathi yemihla ngemihla, EURUSD, Forex Analysis Technical, Ulindelo lweNtengiso, Price Action